Siyaabaha lagu bixiyo dukaanka Dragons Head| Dragons Head Shop
Bogga ugu weyn → Sida Loo Bixiyo
Foomamka lacag bixinta:
Fadlan dooro ikhtiyaarkan markaad lacag bixinayso waxaan email kuugu soo diri doonnaa faahfaahinta bangiga. Marka la helo lacag la sifeeyay waxaan dirsan doonaa amarkaaga. Haddii aad lacag ka bixinayso dibedda waxaan ku siin doonnaa faahfaahintayada IBAN, kuwan waxaa lagu xaqiijin karaa at Xisaabiyaha IBAN
Hab ammaan ah oo sugan oo lagu bixin karo iyadoo la isticmaalayo kaarkaaga Visa, Mastercard, Amex ama Maestro
Waad bixin kartaa coinpayments.net in lagu bixiyo tiro badan oo cryptocoins ah oo ay ku jirto Bitcoin , Lacagta Bitcoin, Ethereum ama Litecoin , aamin ah, aamin ah oo leh sir badan oo qoto dheer leh.
Dirista lacag caddaan ah ayaa khatar ku ah adiga waxaanan kuu soo jeedin lahayn haddii aad doorato ikhtiyaarkan inaad ku dirto baqshad huwan oo si fiican loo xiray si aadan uga digin tuugada iman karta waxa ku jira. Waxaan sidoo kale soo jeedin lahayn inaan u dirno tan iyada oo gaarsiin la hubo. Fadlan sidoo kale ku soo lifaaq lambarkaaga dalabkaaga iyo faahfaahintaada si aad noogu oggolaato inaan helno dalabkaaga oo aan u habaynno si aan dib -u -dhac lahayn.
Fadlan u soo dir jeeggaaga la bixiyay ee lagu bixiyo Dragons Head Shop Ltd, fadlan ogow waxay qaadan kartaa ilaa 5 maalmood si jeegga loo nadiifiyo mana kuu soo diri karno alaab ka hor intaan lacagtu nadiifin. Fadlan sidoo kale ku qor lambarka amarka xagga dambe ee jeegga.
U dir lacag ama jeeg kasta:
Dragons Head Shop Ltd, 14 Broadview Road, London SW16 5AU, Boqortooyada Ingiriiska
Marka lacag -bixinta la dhammaystiro dalabkaaga waxaa laguugu soo diri doonaa baakad qarsoodi ah sida ku cad faahfaahinta ku jirta page maraakiibta
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid fadlan email noogu soo dir enquiries@dragonsheadshop.co.uk ama isticmaal foomka xiriirka hoose.